लागुना नेग्रा, दक्षिणी अर्जेन्टिनामा गन्तव्य यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | अर्जेन्टिना, के हेर्ने
अर्जेन्टिना यो बहु परिदृश्यहरूको देश हो, यो सबै तपाईंले देखाउनु हुने मुख्य बिन्दुमा निर्भर गर्दछ। हेडि south्ग दक्षिण तपाईं एक मा चलाउनु हुनेछ ताल परिदृश्य अद्वितीय, सुन्दर, पहाडहरू, जsts्गल, ताल, नदी र लगगन प्लस अनौंठो शहर वा शहर जुन आंशिक रूपमा स्विस क्यान्टोनबाट लिइएको देखिन्छ।
यो जहाँ छ लागुना नेग्रa, जिज्ञासु पदयात्रीहरूको लागि गन्तव्य। यदि तपाइँ भ्रमण गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने बारिलोचे र तपाईं यस सानो र लुकाइएको लगुन वरिपरि हिंड्नेहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंको सूचीमा थप्न सकिन्छ।
1 बारिलोचे, दक्षिणी अर्जेन्टिनामा गन्तव्य
2 कोलोनिया Suiza र लगइन
बारिलोचे, दक्षिणी अर्जेन्टिनामा गन्तव्य
यस शहरको पूरा नाम हो सान कार्लोस डे बुडापेस्ट र यो अर्जेन्टिना प्रान्त रियो नेग्रोमा अवस्थित छ, ब्युनोस आयर्सबाट XXXXX को बारेमा। तपाईं विमानबाट वा लामो दूरीको बस द्वारा त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि यात्रा धेरै लामो छ यदि तपाईंले यस यातायात को साधन रोज्नुभयो भने।
बारिलोचे धेरै जनसंख्या भएको शहर हो र यसैले नै यसको शहरी प्रोफाइल शैलीहरूको मिश्रण हो। क्लासिकल अल्पाइन निर्माण राम्रोसँग संरक्षित गरिएको हुनुपर्दछ तर यो गरिएको थिएन र त्यसैले त्यस्ता भवनहरू छन् जुन उनीहरूले कहिल्यै निर्माण नगरे राम्रो हुने थियो। तर सबै भन्दा राम्रो र सब भन्दा क्लासिक मुख्य वर्ग को चारै तिर तथाकथित नागरिक केन्द्र मा स्थित छ र प्रभावकारी र विशाल को धेरै निकट नाहुएल Huapi ताल।
यो शताब्दीयौं पुरानो सहर हो जहाँ संन्डेन्स किड र बुच कासिडी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रख्यात बैंक लुटेरा, हिंडे र यहाँ पनि एक भन्दा बढी नाजी अपराधीहरूले शरण लिएका थिए। यो २० औं शताब्दीभरि बढेको छ र त्यो शताब्दीको मध्यदेखि यो अर्जेन्टिना उच्च विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि क्लासिक स्नातकको यात्रा गन्तव्य भयो।
यो बारिलोचेको बाहिरी छेउमा छ र यो सानो शहर हो कोलोनिया Suiza, कालो लगुन को प्रवेशद्वार।
कोलोनिया Suiza र लगइन
यो शहर अवस्थित छ बारिलोचेबाट २ 25 किलोमिटर मात्र, एक सुन्दर पहाडको फेदमा बनाइएको, सेरो लोपेज। यसलाई यस्तो नाम दिइएको छ किनकि यो फ्रान्सेली भाषी स्विस आप्रवासीहरू द्वारा जनसंख्या गरिएको थियो। आज यो क्लासिक गन्तव्य हो वा चियाको लागि जान र यो हो यहाँबाट सडक कालो लगुन तिर जान्छ.
विशेष रूपमा, सडक राष्ट्रिय मार्ग bridge bridge पुलको पूर्वतिर गोय स्ट्रिममा over०० देखि सुरु हुन्छ। त्यहाँ संकेतहरू छन् ताकि तपाईं हराउन सक्नुहुन्न।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईंसँग आफ्नै यातायात छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि शहरबाट तपाईं बस नम्बर १० लिन सक्नुहुनेछ, वा सामूहिक अर्जेन्टिनीहरु उनीहरुलाई भन्छन्। यो मार्ग कूल कभर ,14००,००० किलोमिटर र यसको अन्तमा पानी दर्पण अवस्थित छ। बाटो गोय स्ट्रिमको बाँया किनारमा जान्छ र एक सुन्दर उपत्यकाको बीचमा हुन्छ जुनसुकै मौसम तपाईं जानुहुन्छ। यो मल्लिन र कोहियूको जंगल हुँदै जान्छ, कहिलेकाँही ज wild्गली फूलहरू वा नर्कटहरूसँग बिन्दु भएका र कहिलेकाँही तीखा र चट्टानी ढलानहरू हुँदै जान्छ।
यो मार्ग हिड्नुको अर्थ हो पाँच देखि सात घण्टा हिंडाई त्यसैले यो हाईकर्सका लागि उत्तम छ। पहिलो किलोमिटर धेरै गाह्रो छैन, तर लगभग आइपुग्दा यो एक लामो ठाँउ सर्पिल मार्गमा यात्रा गर्न थाल्छ जुन हाइकरको अन्तिम शक्ति निकाल्छ। लगानमा पुग्न अन्य विकल्पहरू छन्, यो मार्ग जुन सेरो लोपेज शरणबाट जान्छ वा उही पर्वतबाट अर्को शरणमा, ज्याकब।
मार्ग विज्ञहरु द्वारा सूचीबद्ध गरीएको छaसजिलो / मध्यम कठिनाई ट्रेल (डिसेम्बर र अप्रिल बीच), meters०० मिटरको उचाई भिन्नताका साथ।
कालो लगून केवल १ hect हेक्टरमा पानी दर्पण हो, दुई पहाडहरूको फेदमा अवस्थित, बेली विलिस र नेग्रो। कालोतिनीहरूले यहाँ वरिपरिको लगgo्गलाई भनेझैं, यो अचानक हाम्रो दृश्य क्षेत्रको बीचमा देखा पर्दछ, मानौं यो एक क्रेटर ताल हो। गर्व जाडो महिनाहरूमा यो हिउँको बाक्लो पत्रले ढाकिएको हुन्छ। यो अवस्थित छ १1650० मिटर उचाईमा र यो चारैतिर ठाडो, ठाडो, ढु walls्गा पर्खालहरूले घेरिएको छ जुन यसको वरिपरि देखिन्छ।
यसको समुद्र तट छ, सानो र कंकड, जुन पश्चिमी तटमा छ र पूर्वी तटमा त्यहाँ केही अन्य समुद्र तटहरू छन्। यस तटमा पनि अवस्थित छ शरण इटाली - मानफ्रेडो सेग्रे, क्लब एन्डिनो अर्जेन्टिनोको स्वामित्वमा रहेको छ, जसले प्याटागोनियामा हिमाल गतिविधिहरू प्रचार गर्दछ र १ 30 XNUMX० को दशक देखि। यो एक सरल छ ढु stone्गा आश्रय, चित्रित ओचर वा गाढा रातो, जसमा करीव people० व्यक्तिहरू आफ्नै निद्रा झोलामा रात बिताउन सक्छन्।
शरणार्थीले ग्यास्ट्रोनोमी सेवाहरू प्रदान गर्दछ (ब्रेकफास्ट, लन्च, बेलुका र खाजा)। यसमा पिज्जा, स्यान्डविच, कफि, मिठाई, बियर, वाइन र घर बनाइएको बियर हुन्छुना नेग्राबाट नै पानीले बनेको हुन्छ।
यो साइट नोभेम्बरदेखि अप्रिलको मध्यसम्म खुल्ला छ र मे देखि यसमा खुला रहन्छ तर सेवाहरू प्रस्ताव गर्दैन, त्यसैले त्यसो गर्न तपाईं आफ्नै उपकरणहरू (स्लीपिंग ब्याग, खाना, कोट, हीटर) ल्याउनु पर्छ। यदि तपाईंको अभिप्राय उत्तम रहन र सबैभन्दा सिफारिस गरिएको हो भने राम्रो सल्लाह प्राप्त गर्न क्लब एन्डिनो ब्यारिलोमा जानु हो। के शुल्कहरू ड्राइभ? पूर्ण बोर्ड (डिनर, रातरात, बिहानको खाजा र भान्छाको प्रयोग) को लागी $ 850 .० अर्जेन्टिना, आधा बोर्ड, बेलुकाको खाना, $ 570० र राती $ .०० को लागत। त्यसो भए प्रत्येक खानाको आफ्नै मूल्य हुन्छ।
अर्जेन्टिना पेसोको अन्तिम ठूलो अवमूल्यनलाई ध्यानमा राख्दै, मूल्यहरू, यदि तपाईंसँग यूरो वा डलर छ भने, वास्तविक सम्झौता हो (२ 27 पेसो एक यूरो बराबर हो, अधिक वा कम)।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » अर्जेन्टिना » लागुना नेग्रा, दक्षिणी अर्जेन्टिनामा गन्तव्य